Self-nyagide High Polymer bitumen waterproofing akpụkpọ - China Xinle Hongtai Waterproof
SBS bitumen akpụkpọ ahụ ...
Aluminum ntekwasa ...
Emulsioned korota osisi
Bitumen waterproof akpụkpọ
Aluminum ntekwasa PITA film
Gbanwetụrụ Asphalt taa APP Waterproof akpụkpọ ahụ N'ihi Roa ...
China gbanwetụrụ bitumen waterproof akpụkpọ ahụ productio ...
Bitumen waterproofing akpụkpọ ahụ mmepụta akara
Self nrapado Bituminous waterproofing akpụkpọ / Fla ...
Self-nyagide High Polymer bitumen waterproofing akpụkpọ
Type: Waterproof akpụkpọ
Ebe nke Si Malite: Hebei, China (Chile)
Main ogbako: 60x (12-15) x (6-8)
Ọkpụrụkpụ: 3mm, 4mm
Ngwa: n'elu ụlọ, na ụzọ ụgbọ oloko, n'okpuru, mgbidi, ọdọ mmiri, etc
N'elu ihe: Pee film, Aluminium foil, Aja, Schist flake, etc
Inforcement: polyester ma ọ bụ faiba glaasi
Low okpomọkụ mgbanwe: -30 ° C, -20 ° C
High okpomọkụ mgbanwe: 70 ° C
Nchekwa oge: Otu afọ
osisi ikpe ma ọ bụ pallet / PS: Anyị nwere onwe ha ikike maka ibubata na mbupụ.
10 ụbọchị mgbe na-anata 30%
Self-nyagide High Polymer bitumen waterproofing akpụkpọ ahụ
polyester Self-nyagide gbanwetụrụ Bituminous waterproofing akpụkpọ ahụ mejupụtara bitumen dị ka ya isi akụrụngwa, SBS, SBR na tackifying resin dị ka ya mmegharị na polyester dị ka ya mkwado. Ya elu n'elu kpuchie polyethylene (Pee) film, ájá ma ọ bụ strippable sịlịkọn film na ya n'okpuru elu kpuchie gbawara n'etiti tọhapụrụ film.
1. Tackifying resin enye akpụkpọ ahụ na ike nyagide ike nke nwere ike ime ka membranes arapara isi n'elu tightly.
2. The akpụkpọ ahụ nwere ezigbo mgbapu-eguzogide ọgwụ, adọka-eguzogide ọgwụ na abrasive eguzogide onwunwe na polyester dị ka ya mkwado.
3. The membranes nwere-onwe-agwọ ọrịa maka obere cracks mere site na gburugburu ebe obibi.
4. Ogologo oge stickiness obi sie dịghị ọdịda-apụ ma ọ bụ ọ bụla leakage n'etiti akpụkpọ ahụ na isi n'elu.
5. The akpụkpọ ahụ nwere nnukwu ike ọdụdọ na ezi elongation onwunwe, ọ pụrụ ịnọgide na-enwe ya udi ọbụna na ikpe nke cracks na deformation na isi n'elu.
6. Ọ dịghị dripping na elu okpomọkụ ma na ọ dịghị cracks na ala okpomọkụ.
7. Ezigbo chemical-eguzogide, corrosion-eguzogide ma na weathering eguzogide.
Construction usoro na ntị:
1) Basic ihicha
Hichaa irighiri, larịị ma ọ bụrụ na e nwere nkọ okuku, o nwere ike na-ewu na-enweghị mmiri, mmiri bụ ekwe.?
2) kpuchie waterproofing mpempe akwụkwọ akpụkpọ ahụ
gbasaa n'elu waterproof mpempe akwụkwọ akpụkpọ ahụ na ahụ ihu na Re, Mgbe emeghere n'akụkụ mpempe akwụkwọ akpụkpọ ahụ. ntị ka yitewere ọnu itinye n'ọnọdụ na-yitewere enweghị ihe ọ bụla ọdịiche.
3) yitewere nkwonkwo waterproof mpempe akwụkwọ akpụkpọ ahụ
(1) yitewere waterproof mpempe akwụkwọ akpụkpọ ahụ: Gbapụtanụ Nweghị akpụkpọ ahụ nke ugboro abụọ na-n'akụkụ onwe-nyagide nke polima ala elu, Wepụ teepu inyefe ọzọ mgbe iche film n'elu, Na ejikọrọ eriri igwe ga ewe iji mado na teepu, ike anwụrụ nke nkịtị, mgbe ọ dị mkpa ka teepu kwesịrị ekwesị kpo oku, mado mmetụta ọzọ bụ ideal.more adept nkụ ọnọdụ ga-etinye.
(2) yitewere nkwonkwo waterproofing mpempe akwụkwọ akpụkpọ ahụ: shọvel mama osisi teepu mgbe n'apata, a na obibia bụ na ọdabara na waterproof oyi akwa nwere ike mmiri ozuzo mmiri.
(3) isi nkwonkwo waterproof mpempe akwụkwọ akpụkpọ ahụ ocking eriri igwe nkịtị ihe ịmụta DNM eriri igwe, eriri igwe bee n'ime warara ma na-edebe mama iru elu, trea n'elu mgbe iche akpụkpọ ahụ, mado elu butt nke eriri igwe, na ike anwụrụ nke nkịtị. obibia adabara maka waterproof oyi akwa nwere ike mmiri ozuzo mmiri, nwere ike izere otú tọhapụ.
4) Akara ndibiat:? DNM mpịakọta n'akuku nke Yin na Yang na ọnụ adịghị mkpa ọzọ oyi akwa ewu, ma nnukwu eriri igwe shop tapawa na-agwụ agwụ mgbe ọnụ obibi na nkọwa nke ihe owuwu zuru ezu na tightness nke ego nhazi , aiming na ikpo isi n'ala nke Re, kpọchie, uzo na nkọwa ndị ọzọ, kwesịrị ịmụta Sikwuo na nrapado teepu, mgbe abọ waterproof mkpuchi mechie ndibiat.
5) nzukọ nabata
6) gasịrị ghọrọ-ewu: mezue ndị na-ewu waterproof oyi akwa, nwere ike mesikwuru ihe binding.d iche oyi akwa - Mgbe akpụkpọ ahụ na-ebikwasị, rụọ nchebe na mwepu oyi akwa dị ka waterproof oyi akwa imewe.
1. Mbara ihu, ime ụlọ ịwụ, usekwu
2. Tunnels, Industrial n'elu ụlọ
3. Ewepụghị na sloped n'elu ụlọ
4. n'okpuru ala, Foundation na retaining mgbidi
Nchekwa & Mbupu
Ebe ahụ akpụkpọ ahụ ekwesị.
Juru n'ọnụ na ike osisi pallet na kpuchie Ada Ada film bụrụ na nke slant
na-pụọ ọkụ mgbe nchekwa na njem.
Membranes kwesịrị echekwara n'okpuru akọrọ na ventilated ọnọdụ iji na-pụọ ìhè anyanwụ na mmiri na-ezo.
Anyị kpọrọ ọ bụla ase zigara anyị ma hụ na a ngwa ngwa asọmpi na-enye. Ọ bụrụ na ị na ịtụ anyị, anyị nwere ike na-ekwe nkwa na àgwà.
Anyị na-etinye gị na iji n'ime anyị uko mmepụta oge iji hụ na ị na-abịa n'oge nnyefe oge na-ezite mbupu mara gị dị ka n'oge na-adịghị dị ka gị iji na-Ẹnam ekese. Anyị na-akwanyere gị nzaghachi mgbe unu natara ngwongwo.
N'ihi na anyị nwere ihe karịrị 10 afọ nke ahụmahụ na-waterproof ụlọ ọrụ, anyị niile ngwaahịa kwekọọ na mba ọkọlọtọ! Anyị nwere ike na-ekwe nkwa magburu onwe ọrụ na a n'oge nnyefe! Your iji bụ welcome n'oge ọ bụla!
Previous: Cheap Price Self-nyagide Polymer bitumen Waterproof roofing akpụkpọ
Osote: Waterproof ihe mmepụta akara bitumen akpụkpọ ahụ Production Line akpụkpọ ahụ bitumen mmepụta akara
bitumen Waterproof akpụkpọ ahụ
Bituminous waterproofing akpụkpọ ahụ
elu ụlọ mmiri ghara ịba n'ime akpụkpọ ahụ
Sbs gbanwetụrụ bitumen roofing mpempe akwụkwọ
1.5mm-5mm SBS gbanwetụrụ bituminous mpempe akwụkwọ Materia ...
APP gbanwetụrụ bitumen Waterproof akpụkpọ
3mm, 4mm Self-nyagide bitumen waterproof membra ...
SBS / APP gbanwetụrụ bitumen Waterproof akpụkpọ
mgbanwe korota Waterproof mpempe akwụkwọ Ihe
1.5mm-5mm SBS gbanwetụrụ Elastomeric bitumen memb ...
Okwu: Hebei shijiazhuangshixinleshiduguzhendugucun shangmaojie